Gịnị bụ idei mmiri? | Netwọk Mgbasa Ozi
Mmiri ozuzo, n'ọtụtụ akụkụ ụwa, na-anabata nke ọma, mana mgbe mmiri ahụ jiri ike dị ukwuu daa ma ọ bụ ogologo oge, oge na-abịa mgbe ala ma ọ bụ ọwa mmiri nke obodo na obodo kwụsị ịkwụsị ya.
Na n'ezie, ebe mmiri bụ mmiri mmiri, ya mere, ihe mmewere na-aga ebe ọ bụla ọ gara, belụsọ n'igwe ojii ga-agbasasị ngwa ngwa, anyị agaghị enwe ihe ọzọ ma ọ bụghị ikwu maka idei mmiri. Ma, Kedu ihe ha bụ na ihe kpatara ha?
1 Kedu ihe ha bụ?
2 Gịnị na-akpata ha?
3 Kedu ihe nchebe anyị nwere megide ha?
4 Idei mmiri na Spain
4.1 Iju Mmiri nke 1907
4.2 Oke ide mmiri nke Valencia
4.3 Iju Mmiri nke 1973
4.4 Tenerife idei mmiri
4.5 Idei mmiri dị na Levant
4.6 Idei mmiri na Malaga
Idei mmiri bụ ọrụ nke mmiri nke mpaghara ebe ndị na-anaghị adịkarị na nke a. Ha bu ihe ndi ekere uwa nke na eme kemgbe ebe mmiri di n’uwa, na - eme oke osimiri, na - enye aka na nguzo nke ndagwurugwu na ala ndaghari.
Gịnị na-akpata ha?
Enwere ike ibute ha site na nsogbu di iche iche, nke bu:
Ntụ oyi: O n’abia mgbe okpomoku di n’elu uwa di ohia karie nke oke osimiri. Ọdịiche a na - eme ka ikuku dị ọkụ na ikuku na - ebili na etiti na elu nke ikuku, si otu a na - ebute mmiri ozuzo na, n'ihi ya, enwere ike ide mmiri.
Na Spain ọ bụ ihe a na-eme kwa afọ nke na-eme site n'oge mgbụsị akwụkwọ.
Udu mmiri: udu mmiri bụ ikuku nke oge a na - eme site na nwepụ nke eriri ikuku. Ihe kpatara ya site na ime ka ụwa dị jụụ, nke dị ngwa karịa mmiri. N’ihi ya, n’oge ọkọchị, ọnọdụ okpomọkụ nke ụwa dị elu karịa nke oké osimiri, nke na-eme ka ikuku dị n’elu ụwa na-eto ngwa ngwa, na-akpata oké ifufe. Ka ikuku na-esi na anticyclones (ebe nrụgide dị elu) gaa cyclones (obere ebe nrụgide) iji dozie nrụgide abụọ ahụ, ifufe dị ike na-esi n'oké osimiri na-efe mgbe niile. N'ihi ya, mmiri ozuzo na-ezo n'ike, na-eme ka ọkwa nke osimiri.
Ajọ Ifufe: Ajọ ifufe ma ọ bụ ajọ ifufe bụ ihe ngosipụta ihu igwe na, ewezuga inwe ike ibibi ọtụtụ ihe, bụ otu n'ime ndị na-ahapụ ka mmiri daa. Ha bụ sistemụ ikuku nwere ikuku na-emechi emegharị nke na-agagharị gburugburu obere nrụgide mgbe ị na-eri nri n'oké osimiri, nke dị na okpomọkụ nke opekata mpe 20 Celsius.
Na-agbaze: na mpaghara ebe snow na-adakarị oge niile na mgbakwunye ọ na-eme nke ukwuu, mmụba na mberede na-ebute ide mmiri na osimiri. O nwekwara ike ịdapụta ma ọ bụrụ na etu mmiri si adaba adaba ma dịkwa iche, dịka nke anaghị adịkarị na mpaghara ebe ihu igwe dị ma ọ bụ ihu igwe.
Ebili mmiri ma ọ bụ ebili mmiri: a phenomena bụ ihe ọzọ nwere ike ibute iju mmiri. Nnukwu ebili mmiri nke ala ọma jijiji na-ebute nwere ike ịsọ oke osimiri, na-akpata ọtụtụ nsogbu maka ndị bi na nke osisi na ahịhịa nke ebe ahụ.
Ha na-aputa ihe kariri na mpaghara Pacific na Indian Ocean, nke nwere oke ala.
Kedu ihe nchebe anyị nwere megide ha?
Ebe ọ bụ na ụmụ mmadụ bidoro ịmalite ịnọ ọdụ, na-edozi n'akụkụ osimiri na ndagwurugwu, ọ na-enwekarị nsogbu: otu esi zere idei mmiri? N’Ijipt, n’oge ndị Fero, Osimiri Naịl nwere ike bute ndị Ijipt nnukwu ọghọm, ya mere, n’oge na-adịghị anya, ha mụrụ otú ha ga-esi were ọwa mmiri nke na-echegharị mmiri na mmiri gbochiri egbochi ihe ọkụkụ ha. Mana ọ dị nwute na mmiri jiri bibie ha mgbe afọ ole na ole gachara.
N'oge agbata obi na mgbe ochie na Spain na ugwu Italy, a na-ewuworị ọdọ mmiri na ọdọ mmiri ndị na-achịkwa ụzọ osimiri. Mana ọ bụ ruo ugbu a, n’oge ugbu a, na mba ndị a na-akpọ mba ụwa mbụ anyị nwere ike igbochi ide mmiri. Ihe mgbochi mmiri, ihe mgbochi ígwè, na-achịkwa ọdọ mmiri, mmelite nke ike drainage nke ọwa mmiriIhe a niile, agbakwunye na amụma ihu igwe mepụtara, enyerela anyị aka ịchịkwa mmiri nke ọma.
Ọzọkwa, nke nta nke nta ka amachibidoro iwu n’elu ụsọ mmiri, bụ ebe ndị idei mmiri na-adịkarị mfe. Ma ọ bụrụ na, ma ọ bụrụ na a eke ebe-agwụ nke osisi, mmiri ga-enwe ọtụtụ ihe ndị ọzọ akụrụngwa ibibi ihe niile, si otú a na-eru n'ụlọ; N’aka nke ozo, oburu na ewughi ya, ma o buru na nke nta nke nta, a weghachitere gburugburu ebe mmadu ntaramahuhu siri ike nwere umu ihe akuku osisi, ihe egwu nke iju mmiri ga-ebibi ihe niile di obere
Na mba ndị na-emepe emepe, n'aka nke ọzọ, sistemụ dịka mgbochi, ịdọ aka na ntị na ihe ndị na-esote anaghị emepe nke ọma, dị ka ọ dị mwute ịhụ oke ifufe ndị na-ebibi mba ndịda Ọwụwa Anyanwụ Eshia. Agbanyeghị, mmekọrịta mba ụwa na-akwado omume iji mee ka ọnụọgụ ndị bi na mpaghara nsogbu dị nchebe.
Idei mmiri na Spain
Na Spain anyị enweela nsogbu ndị kachasị na idei mmiri. Nke kacha njọ n'akụkọ ihe mere eme anyị bụ ndị a:
Iju Mmiri nke 1907
Na September 24, 1907, mmadụ 21 nwụrụ na Malaga n'ihi oke mmiri ozuzo ahụ. Guadalmedina bekee ahụ buru oke mmiri, buru nnukwu mmiri na apịtị nke ruru mita ise n’ogologo.
Oke ide mmiri nke Valencia
N’abalị iri na anọ nke ọnwa Ọktoba n’afọ 14, mmadụ iri asatọ na asatọ nwụrụ n’ihi oke Osimiri Turia tojuru. Idei mmiri abụọ dị: nke mbụ juru onye ọ bụla anya, ebe ọ bụ na ọ dịbeghị mmiri ozuzo na Valencia; nke abụọ rutere n'ehihie gaa mpaghara Camp del Turia. Na nke ikpeazu A chịkọtara 125l / m2, 90 nke ha na 40 nkeji. Osimiri ahụ buru ihe ruru 4200 m3 / s. Na Begis (Castellón) gbakọtara 361l / m2.
Iju Mmiri nke 1973
Na Ọktọba 19, 1973, A chịkọtara 600l / m2 na Zúrgena (Almería) na al Albuñol (Granada). E nwere ọtụtụ ọnwụ; na mgbakwunye, obodo ndị dị na La Rábita (Granada) na Puerto Lumbreras (Murcia) bibiri kpamkpam.
Tenerife idei mmiri
Machị 31, 2002 A chịkọtara 232.6l / m2, na ike 162.6l / m2 n'otu awa, nke kpatara ọnwụ mmadụ asatọ.
Idei mmiri dị na Levant
Foto - Ecestaticos.com
N’agbata Disemba 16 na 19, 2016, oke mmiri ozuzo Levante nke metụtara Obodo Valencian, Murcia, Almería na Balearic Islands kpatara ọnwụ nke mmadụ 5. Na ọtụtụ ihe ihe kariri 600l / m2 gbakọtara.
Idei mmiri na Malaga
Na March 3, 2018 oke ifufe atara ruo 100 lita na isi nke ógbè Malaga, dị ka ọdụ ụgbọ mmiri nke Malaga, Western na Inland Costa del Sol, Serranía na ndagwurugwu Genal. N'ụzọ dị mma, ọ dịghị ọnwụ mmadụ ọ bụla a ga-akwa ụta, mana ndị ọrụ mberede bịara karịa ihe karịrị 150 n'ihi osisi na-ada na ihe ndị ọzọ, na mbuze.
Ọ bụghị nke mbụ ihe dị ka nke a na-eme. N’ezie, ihe omume ndị a dịkwa oke ụkọ. Dịka ọmụmaatụ, February 20, 2017 140 lita mmiri gbakọtara na mita square n'otu abalị. Mberede gara ihe omume 203 n'ihi idei mmiri nke ala ala, ihe ndị dara ada na ụgbọ ala rapaara n'okporo ụzọ.
Nsogbu ya bụ na ógbè ahụ gbara ugwu gburugburu. Mgbe mmiri zoo, mmiri niile na-aga ya. Ndị bi na Malaga na-arịọ kemgbe ka e mee ihe iji gbochie ya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Ihe gbasara ihu igwe » Idei mmiri » Gịnị bụ idei mmiri?